Ceros: Mepụta ọdịnaya mmekọrịta mara mma na-enweghị mmepe | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 26, 2015 Douglas Karr
Dị ka WordPress nwere ahịa usoro njikwa ọdịnaya, ọ ka na-achọ ihe owuwu siri ike, mmezi na-aga n'ihu, na nnukwu ndị otu mmepe iji wuo isiokwu ma ọ bụ ngwa mgbakwunye nke na-eme ka ọ baara gị uru. Anaghị m anwa ịmelata ọ bụ mgbanwe dị ịtụnanya, mana ohere onye ọrụ azụmaahịa na-edebanye ma wuo ebe nrụọrụ weebụ mara mma ga-arụ ọrụ.
Nakwa, usoro nke weebụsaịtị nke mejupụtara menu, broshuọ, na blọọgụ na-amalite ịgbanwe dịka ịkọ akụkọ na ọdịnaya ọdịnaya nke mgbasa ozi na-eme ka itinyekwu aka. Akwukwo ohuru nke atumatu saịtị na-ebido nke na-enye uzo iji jee ije onye obia site na akuko ma banye na ntughari karia uzo di mgbagwoju anya ebe onye oru gha acho ma choo ihe o choro.
Ceros bụ dijitalụ katalọgụ na ọdịnaya management usoro na-enwe olileanya ime nke a. Site na ịdọrọ na dobe, interface nzaghachi na njikọta ecommerce si na igbe ahụ, ọ na-enye ihe ngwangwa ọdịnaya ebe ndị na-ere ahịa nwere ike ilekwasị anya na izipu ozi karịa ịlụ ọgụ na teknụzụ.
Ndị a bụ ụfọdụ isi, atụmatụ pụrụ iche nke Ceros:
Ofụri Esịt Nchọgharị na Cloud dabeere na nhụchalụ oge na ndezi yana mmekorita oge dị n'etiti ndị ọrụ.
Ihe nyocha eji arụ ọrụ nke na-etinye usoro ihe niile nchịkọta dum gbadaa rue na njikọta granular.
Digital-mbụ HTML5 ikpo okwu - onye mbu na onye ozo dijitalụ-mbụ n'elu ikpo okwu
Dọrọ na dobe interface.
Mmekọrịta Ecommerce - Sere na ogwe ngwaahịa na ụgbọ ibu azụmahịa nwere arụmọrụ zuru oke na-enweghị mmepe ọ bụla.
Ngwaọrụ na agnostic ọwa - Mepụta otu ahụmịhe ọ na - eme ka ihu ihuenyo ọ bụla wee rụọ ọrụ maka akụkụ ọ bụla iframe.
Nke a bụ ezigbo ihe atụ nke teknụzụ site Newscred, ndị Ike nke Akụkọ Akụkọ.
Lelee ụfọdụ nke ndị ọzọ nnukwu ihe atụ nke infographics mmekọrịta, microsites na saịtị akụkọ banyere wuru na Ceros. Ọ bụ nnọọ nke ọma guzobere ikpo okwu na a ọnụ ọgụgụ na-eto eto nke ndị ahịa bụ isi.
Tags: efuọdịnaya mmekọrịtaIhe omuma ihe omumaakụkọịkọ akụkọakụkọ cms
Etu esi edozi mmejọ 4 Mobile Marketing na ị na-eme